Christmas Live Wallpaper Free 7.1F Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.1F လြန္ခဲ့ေသာ4လက
Application မ်ား စိတ္ႀကိဳက္ျပဳျပင္ျခင္း Christmas Live Wallpaper Free
Christmas Live Wallpaper Free ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
4 new Christmas trees and multi-coloured sparkle mode!
"ခရစ္စမတ်တိုက်ရိုက် Wallpaper အခမဲ့"
တစ်ပတ်ဝန်းကျင်ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကို featuring တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 3D တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဝေါလ်ပေပါ, သင်ခရစ္စမတ်မှလက်ထက်၌ချရေတွက်နိုင်သည့်နေရာတွင်တစ်ဦးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခရစ်စမတ်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲ, ဒါမှမဟုတ်နှစ်သစ်ကူးနေ့ဖြစ်၏။ အခမဲ့ဗားရှင်းတွင်ထည့်သွင်းအားလုံးမြင်ကွင်းများတိုက်ရိုက် wallpaper ကိုနောက်ခံအဖြစ်ခံစား, ဒါမှမဟုတ်သင့်ပတ်လည်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြည့်ရှု, အလျင်အမြန်သင့်ရဲ့ settings ကို customize နိုင်တဲ့အပြည့်အဝအပြန်အလှန်ပြီးရင် foreground app ကိုအဖြစ်နိုင်ပါသည်။
သငျသညျအခမဲ့ဗားရှင်းပျော်မွေ့နေလျှင် /> ★ခရစ္စမတ်သစ်ပင်မြင်ကွင်းတစ်ခု (6 ကာတွန်းကားကကင်မရာလှုပ်ရှားမှု)
Christmas Live Wallpaper Free အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Christmas Live Wallpaper Free အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Christmas Live Wallpaper Free အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Christmas Live Wallpaper Free အား အခ်က္ျပပါ
apps-me စတိုး 52.87k 15.01M
Christmas Live Wallpaper Free ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Christmas Live Wallpaper Free အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.1F
ထုတ်လုပ်သူ Jetblack Software
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://jetblacksoftware.com/privacy-policy.html
App Name: Christmas Live Wallpaper Free
Release date: 2018-12-18 23:29:21
လက်မှတ် SHA1: C0:AD:AC:E3:8D:47:0A:11:C4:98:7F:40:BF:AA:62:47:13:FE:35:28
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Antonio Argentieri
အဖွဲ့အစည်း (O): Jetblack Software Ltd
နယ်မြေ (L): Dudley
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): West Midlands
Christmas Live Wallpaper Free APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ